नयाँ बन्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिबारे ज्योतिष रिजालको ठूलो भविष्यवाणी ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
नयाँ बन्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिबारे ज्योतिष रिजालको ठूलो भविष्यवाणी !
अहिले अमेरिकामा राष्टपतिकाे चुनावलाई लिएर राजनीतिक माहाेल तातेकाे छ । नजिकिँदै गरेकाे राष्ट्रपतिकाे चुनाबलाई लिएर संसारभरका मानिस हरुकाे ध्यान उक्त चुनाबमा केन्द्रित भएकाे हाे।
फेरिपनि ट्रम्प नै सत्तामा रहिरहन्छ या जनताले अहिलेकाे नीतिलाई अस्वीकार गर्दै नयाँ राष्ट्रपतिलाई चयन गर्ने भन्ने विषयले यतिबेला चर्चा बटुलिरहेकाे छ । के भाग्यले साथ देला त बिडेनलाई ? कस्ताे चलिरहेकाे छ ट्रम्प र बिडेनकाे ग्रहदाशा भाग्यले कस्लाई साथ देला त ।
नाेभेम्बर ३ मा अमेरिकामा राष्ट्रपतिकाे चुनाब हुन लागेकाे छ । यस चुनावमा रिपब्लिकन पार्टीका वर्तमान राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्पलाई डेमाेक्रेटिक पाटिका बिडेनले कडा चुनाैती दिएका छन् ।
यतिबेला काेराेना महामारी, आर्थिक मन्दी तथा चीनकाे पछिल्लो विवादास्पद विषयलाई लिएर प्रतिद्वन्द्वी ट्रम्पलाई कमजाेर बनाउने रणनीतिमा बिडेन लागिरेकाे संकेत देखिएकाे छ । बिडेनले भारतीय र अश्वेत मुलुककी कमला हैरिसलाई उपराष्ट्रपतिमा उमेद्वार बनाएर अमेरिकामा भारतीय र अश्वेत भाेटरहरुलाई वर्तमान राष्ट्रपतिका खिलाप रणनीति बनाएकाे आराेप लाग्न सुरु भैसकेकाे देखिएकाे छ ।
शनिकाे अशुभ अन्तर्दशाका कारणले अशुभफलमा वृद्धि
१४ जून१९४६ मा न्यूयाेर्कमा बिहान १० बजेर ५२ मिनेटमा अद्भुत राजयाेमा बर्तमन राष्ट्रपति ट्रम्पकाे जन्म भएकाे थियाे । सिंह लग्नमा जन्मिएका ट्रम्पकाे लग्नमै अर्थात टाउकाेमा याेगकारक ग्रह मंगल बसेकाे छ ।
अग्नि कारकग्रह मंगलकाे चतुर्थ दृष्टि बृश्चिककाे चन्द्रमामा परेका कारणले गर्दा उनमा कमान्डिङ्ग पावर धेरै देखिएकाे हाे र यहीँ याेगका कारणबाट नै अद्भुत राजयाेगका कारणले प्रसिद्धि पनि प्राप्त भएकाे हाे ।
राजसत्ता स्थानको अर्थात कर्म भावमा बसेकाे राहु लग्नाधीपति सूर्यसंग युक्ति बनाएर पञ्चमेश गुरुकाे दृष्टि परेकाले धन,बुद्धि तथा भग्यकाे पूर्णरुपमा साथ रहेकाले दाेस्राे ठुलाे राजयाेग निर्माण भएकाे छ ।
ग्रहयाेग राम्राे हुदाहुदै पनि अहिलेकाे समयमा ट्रम्पकाे राम्राे दिन भने चलेकाे छैन ।
लेखक : सुरेशचन्द्र रिजाल
सूर्य,चन्द्रमा,मंगल तथा राहुकाे दशा डाेनाल्ड ट्रम्पले पार गरिसकेका छन् जीवनमा उनले भाेगेका दशाहरुमा उनले अकुत धनसम्पति आर्जज पनि गरिसकेका छन् । राहु तथा मंगलकाे दशा चलिरहेके समयमा उनले २०१६ मा दिग्गज नेता हिलारी क्लिंटन लाई पराजित गर्दै ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न सफल भएका हुन ।
स्थानहानिकाे नियमअनुसार वाणिस्थानमा बसेका बृहस्पति ग्रहमाथि बार्हाैभाबमा बसेकाे शनिकाे अशुभ तृतीय दृष्टि परेकाले उनले बाेलेका बाेलि प्राय विवादास्पद बन्ने गरेकाे हाे । अहिले बृहस्पतिमा शनिकाे अन्तर्दशा चलिरहेकाे छ यसैका कारण उनलाई काेराेना भाईरसले आक्रान्त बनाईरहेकाे छ ।
गुरु तथा शनिकाे दशा राजनितीक रुपमा शुभ नरहने उल्लेख गरिएको छ । नाेभेम्बर १४ सम्म शनिकाे साढेसाति दशापनि रहने भएकाले अहिलेकाे समय ग्रहअनुसार अनुकुल नरहेकाे जानकारी गराएका छन् ।
अमेरिकी नागरिकले बिडेनकाे सरकार लाई साथ दिने सम्भावना कति छ ?
२० नाेभेम्बर १९४२ बिहान ८ बजेर ३० मिनेटमा पेंसिल्वेनियामा जन्मिएका बिडेन अमेरिकी राजनीतिक वृत्तमा एकदमै ठूलाेनाम हाे ।
लगातार ७ पटक अमेरिकी सिनेटमा चुनिसकेका राजनितीज्ञ हुन । बिडेन बर्ष २००९ देखि २०१८ सम्म उपराष्ट्रपति पनि भैसकेका छन् । बृश्चिक लग्नमा जन्मिएका बिडेनकाे कुण्डलीमा भाग्य भावमा उच्चकाे बृहस्पति ग्रह बसेर महत्त्वपूर्ण स्थानमा शुभ दृष्टि परेकाे छ । ट्रमकाे राशि र बिडेनकाे लग्न एउटै भएकाले पनि राशि भन्दा लग्न नै शक्तिशाली हुने ज्याेतिषीले जानकारी गराएका छन् ।
बृहस्पति तथा राहुकाे अन्तर्दशा चलेकाले बिडेन अमेरिकाकाे राष्ट्रपति हुने याेग प्रवल रहेकाे छ ।
दक्षिण एसियामा रहेका ज्याेतिषी हरुसंगकाे सहयाेगमा तयार पारिएको हाे ।
लेखक दक्षिण एसियाली ज्याेतिष महासंघ नेपालका महासचिव हुन ।